हार्ड डिस्क कम्प्यूटरमा सबै जानकारीको भण्डार हो। निस्सन्देह, विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूको लागि जानकारी फरक मूल्यको हो, तर शायद कसैले पनि यो पुरा गर्न सक्नेछ। यस अप्रिय परिस्थितिबाट बच्नको लागि हार्ड डिस्क (HDD) असफल भएका क्षेत्रहरूको उपस्थिति वा यसको संचित त्रुटिहरूको कारण असफल भएमा, यो निरन्तरता यसको स्थिति जाँच गर्न आवश्यक छ।
एचडीडी कम्प्यूटर को एक "सज्जन" भाग हो कि यस तथ्य को कारण डिस्क मा एक विशाल गति मा घुमाव को छ, र पढाई को माथि को माथि ले जाएँ। द्वारा र ठूलो, एक हार्ड ड्राइभले सही तापमान मोडमा राख्दा साढे वर्ष काम गर्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, हार्ड ड्राइव कंपन र "अचानक हिला" को "डरलाग्दो" हो। यसैले, एचडीडी नोटबुक र netbooks को विनाश को सबै भन्दा कमजोर। तिनीहरू प्रायः टूटेको क्षेत्रहरूको लागि डिस्क जाँच गर्न आवश्यक छ।
हार्ड ड्राइवको ब्रेकडाउन धेरै ठूलो छन्: शारीरिक बिदाईबाट माइक्रोक्रोमरहरूसँग समस्याहरू। यस लेखमा तिनीहरूको बारेमा लेख्नु हुँदैन। हामी आफैलाई मात्र caveats मा सीमित गर्दछ र त्रुटिहरूको लागि डिस्क चेक के हो।
विशेष ट्रयाकहरूमा HDD रेकर्ड जानकारी - सेक्टरहरू। यदि तिनीहरूमध्ये कुनै क्षतिग्रस्त छ भने, त्यसमा समावेश भएको जानकारी हराएको छ। र, प्राय: यो भविष्य भविष्यमा जानकारी भण्डार गर्न असमर्थ हुनेछ । टूटेको क्षेत्र पहिचान गर्न डिस्कको सतह जाँच गर्दैछ। तपाईं तिनीहरूलाई दुई तरिकामा हानि गर्न सक्नुहुन्छ: गलत ढाँचा गरेर गरेर गलत जानकारी लेखेर। यो प्रकार को त्रुटि तार्किक क्षति भनिन्छ। र तपाईँले डिस्क छोड्न सक्नुहुन्छ - यो पहिले नै क्षेत्रहरूमा भौतिक क्षति हुनेछ। दोस्रो विकल्प सबैभन्दा खतरनाक छ, किनकि यसले सम्पूर्ण HDD लाई बेवास्ता गर्न सक्छ। ल्याप्टपहरू निरन्तर कम्पनको अधीनमा हुन्छन् र स्थानान्तरणको बेला हिंड्छ, यसले नकारात्मक रूपमा डिस्कको स्थितिलाई असर गर्छ।
डिस्क जाँच नियमित Windows उपकरण द्वारा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यो गर्नका लागि, "मेरो कम्प्यूटर" मा जानुहोस्, दायाँ माउस बटनको साथ वांछित HDD चयन गर्नुहोस्, "गुण" मा जानुहोस्। त्यसपछि "उपकरण" ट्याबमा जानुहोस्, "चेक कार्यान्वयन गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस् र आवश्यक वस्तुहरू चिन्ह लगाउनुहोस्। यो उपयोगिताले तपाईंलाई सेटिङ्हरू बहाल गर्न दिन्छ। वैसे, शारीरिक क्षति हटाउन सम्भव छैन। प्रणाली ड्राइभ जाँच गर्न (जसमा अपरेटिङ सिस्टम स्थापित छ), तपाईंलाई रिबुट गर्न आवश्यक छ। कामको अन्त्यमा, तपाईं खराब क्षेत्रहरूको संख्या र बरामद गरेको रकम देख्न सक्नुहुन्छ।
दृढतापूर्वक हार्ड ड्राइभको स्थिति हेर्नुहोस्, HDD स्क्यान उपयोगिता एकदम सही छ। हार्ड ड्राइभ जाँच गर्ने समय यसको भोल्युम र तपाईंको कम्प्यूटरको शक्तिमा निर्भर गर्दछ। कार्यक्रम सञ्झ्यालमा, तपाईँले भरी भएका व्यक्तिहरूमा हरियो र रातोमा सम्पूर्ण ट्र्याकिकल अंक देख्नुहुनेछ। टूटेको सेकेन्डको लागि डिस्क जाँच गर्दै तपाईंलाई भ्रष्ट ट्र्याकहरूको प्रतिशतको प्रतिशतको रूपमा अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ। साथै धेरै उपयोगिताहरूमा, तपाईं ग्राफिक रूपमा डिस्कहरूको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ। केहि कार्यक्रमहरू बिच्छेदन क्षेत्रहरू पुनर्स्थापना गर्ने प्रकार्य छ।
म नोट गर्न चाहन्छु कि डिस्कका लागि डिस्क जाँच गर्दा तपाईंको HDD को वर्तमान स्थिति निर्धारण गर्नेछ। यदि यो महत्त्वपूर्ण छ भने, तपाइँ ड्राइव को प्रतिस्थापन गर्न चिन्ता गर्नुपर्दछ।
स्काइपमा पासवर्ड र विद्युतीय पहिचानकर्ता पुन: प्राप्ति गर्दै
कम्प्यूटरबाट "वेब" हटाउने: शुरुवातका लागि निर्देशनहरू
"Yandex" मा द्रुत लिंकहरू: कसरी गर्ने? केले द्रुत लिङ्कहरू दिनेछ?
घरमा सुन्तला रूख - आफ्नो घर मा सुनको फल
2011 मा विस्तारित scrappage कार्यक्रम
को नियुक्ति र स्थापना - बाथरूम लागि handrails
वर्णन, निदान, वयस्क र बच्चाहरु मा उपचार र ब्रोंकाइटिस को लक्षण